Aakar November 07, 2013
ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, गुगल प्लस आदि चलाउनेहरुका लागि यो सिम्बोल " # " नयाँ होइन। पहिले नम्बर/पाउन्ड सिम्बोल भनेर चिनिने # लाई ट्विटरमा प्रयोग गर्न थालेसँगै ह्यासट्याग भन्ने गरियो । ट्विटरमा एउटै विषयमा कुरा गर्दा # सिम्बोल सँगै उक्त विषय/शब्द लेखौँ भनेर गरिएको ट्विटबाट ट्विटर ह्यासट्यागको थालनी भएको थियो ।
ओपन सोर्स एडभोकेट्, क्रिस मेसिना (Chris Messina) ले सन् २००७ को अगस्टमा ट्विटर ह्यासट्यागको सुरुवात गरेकाथिए । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार क्रिसलाई 'ह्यासट्यागको गडफादर' (hash godfather) भन्ने गरिन्छ ।
ट्विटरमा ह्यासट्यागको सुरुवात सन् २००७ मा भएपनि, यसको व्यापक प्रयोग हुन भने केही समय लागेको थियो। ट्विटरको ह्यासट्यागको शैलीलाई इन्स्टाग्राम, गुगलप्लस, फेसबुक आदिले पनि अनुसरण गरिसकेकाछन् । ट्विटरमा चलाइने 'क्याम्पेन', 'ट्विट च्याट' आदिमा ह्यासट्यागको विशेष महत्व रहन्छ । जनमत बुझ्नका लागि पनि ह्यासट्याग महत्वपूर्ण माध्यम हो । जस्तोकि अबको दुई हप्तामा नेपालमा हुन गइरहेको संविधान निर्वाचनका सन्दर्भमा गरिएका अधिकांश ट्विटहरुमा #NepalVotes का साथै #NepVote आदि ह्यासट्यागहरु प्रयोग गरिएकोछ। यी दूई ह्यासट्याग फलो गरिएको खण्डमा निर्वाचन सम्बन्धि भइरहेका विविध कुराहरु थाहा पाउन सकिन्छ ।
हप्ता दिन अघि मात्रै पनि #SundayMorningLoveYou ह्यासट्याग राखेर धेरै ट्विटहरु गरिएको थियो । फलो फ्राइडे #FF पनि ह्यासट्यागको गतिलो उदाहरण हुनसक्छ । पपुलर भएका ह्यासट्यागहरु ट्विटरको ट्रेन्डिङ टपिक नि बन्न सक्छन् । ह्यासट्यागबारे अझ धेरै जानकारी लिन ट्विटरको सपोर्टपेज (Using hashtags on Twitter) हेर्न सक्नुहुन्छ ।
हामी ट्विटरमा ह्यासट्याग आउनुभन्दा पहिले # लाई विभिन्न रुपमा चिन्ने गर्थ्यौँ तर अब # लाई जहाँ देखेपनि हामी हत्तपत्त ह्यासट्याग नै भन्नेगर्छौँ ।पत्यार लाग्दैन भने, २० पिक्सेल को ह्यासट्याग सम्बन्धि तलको रमाइलो कार्टुन हेर्नुस् ।;)
Kanchanojha November 8, 2013 at 9:31 AM
Awesome #hashtags :-)
Deepak Parajuli November 22, 2013 at 1:31 PM
अाकार जी नमस्कार, मैले office 2010 मा नेपाली लेख्दा microsoft ले दिएको नेपाली युनिकोड चलाउन लागेको, नेपाली स्वरवर्ण लेख्नै जानीन, कुन युनीकोड प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । offline मा काम गर्नु पर्ने भएकाले कुन युनिकोड चलाउनु राम्रो हुन्छ ? स्वर वर्ण अ अा इ इर उ उफ ए एे अो अाै अं अः
Aakar Anil November 22, 2013 at 1:45 PM
मलाई चाँही रोमनाइज्ड युनिकोड ठिक लाग्छ, सबै तिर काम गर्छ अनलाइन/अफलाइन । यो हेर्नुहोला http://www.aakarpost.com/2007/12/romanized-unicode.html म सन् २००७ देखि यही चलाउँदै आएको छु।
Deepak Parajuli November 22, 2013 at 8:53 PM
Pramod Shahi April 14, 2014 at 5:21 AM
आकार दाजुले ट्वीटरको मात्र #ह्यासट्यागको कुरा गर्नु भएको??
ट्वीटर र अन्य सामाजिक संजालमा प्रयोग भैरहेको #ह्यासट्याग प्रणाली "इन्टरनेट रिले च्याट"मा प्रयोग गरिने #channels र #topics बाट जन्म भएको हो..